Piononos de Santa Fe - Resipeo mora miaraka amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
Santa Fe Pioneers
tsindrin-tsakafo145 minitraOlona 14260 kaloria
Ny pionono dia mofomamy Granada tsara tarehy noho ny fanomanana mofomamy mofomamy misy fofona miaraka amina toastasy misy tsiro. Ity mamy ity dia natao ho fanajana ny Papa Pius IX ka nanjary nalaza noho izany ny vokany.
Ireto cupcakes ireto dia vita amin'ny mofomamy spaonjy mihorona ary nosotroina amin'ny rano sy siramamy. Ny fahatsapany dia hanome azy io endrika malefaka sy vaovao izay hofenoina crème pastry.
Mba hahatonga azy io tsy hay tohaina kokoa, dia nohaingoana crème creme tsara izy ireo izay nodorana siramamy sy blastch tamin'ny farany mba hanomezana azy ilay tsiro voatoto. Raha te hahalala ny fomba anaovana azy tsikelikely ianao dia azonao atao ny mijery ny horonantsarinay fampisehoana.
1 Santa Fe Pioneers
Jereo ireto mofomamy be ranony antsoina hoe Piononos ireto. Izy ireo dia mofomamy kely voahodina ary nofenoina crème matsiro izay hodorana miaraka amin'ny blowtorch, hanomezana an'io tsiro voatoto be io.
Fotoana fiomanana: 1h 30M
Fotoana hiketrehana: 55M
Fotoana manontolo: 2h 25M
110 g ny lafarinina varimbazaha
Mitrandraka lavanila 1 sotrokely
75 ml rano
Yolk atody 6
Ronono manontolo 500 ml
Katsaka katsaka 90 g
Soso-koditry ny voasarimakirana
Sotro fihinana lavanila iray sotro
Siramamy volontsôkôlà vitsivitsy handoroana miaraka amin'ny blowtorch
Manomboka amin'ny fanaovana ny mofomamy izahay. Ao amin'ny verantsika Thermomix dia apetrantsika ny lolo ary ampio ny atody 4 sy ny siramamy 100 g. Mandrindra izany mandritra ny fotoana 6 minitra amin'ny 37 ° sy ny hafainganana 4.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180 ° izahay. Ampiarahinay ny lafarinina 110 g, ny lafarinina lavanila ary ny vovo-mofo roa sotro fihinana. Izahay dia mandahatra mandritra 4 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Manomana lovia mahitsizoro (33 × 22 cm eo ho eo) izahay miaraka amina taratasy misy menaka manitra ao ambany mba hahafahana manala mofomamy mora rehefa masaka. Atsipitsika ao anaty lovia ny kobanay, alaivo tsara ny tany ary apetraka ao anaty lafaoro mandritra ny 12 minitra.
Raha mbola afaka manao syrup isika. Ao anaty veranay madio dia ampio ny rano 75 ml sy ny siramamy 75 g. Mandrindra izany mandritra ny fotoana 6 minitra amin'ny 105 ° amin'ny hafainganana 0,5. Ny valiny dia «syrup» misy endrika somary matevina. Nanokana izahay.
Mba hanaovana ny crème pastry, dia ampio ao amin'ny veranay ny ronono manontolo 500 ml miaraka amin'ny tehina kanelina sy ny voasarimakirana. Hampiditra azy io mandritra izany isika 4 minitra amin'ny 110 ° amin'ny hafainganana 0,5. Rehefa vita dia esorinay ny kanelina sy ny hoditra.
Manaraka izany dia ampianay ny 6 yolks, ny siramamy 100 g, ny sotro fihinana vanila iray sotro ary ny lafarinina katsaka 90 y na akam-katsaka. Izahay dia mamolavola azy io 9 minitra amin'ny 90 ° amin'ny hafainganana 3. Izahay manasaraka ny crème dia avela hangatsiaka.
Miara-masaka sy mangatsiaka ny mofomamy dia esorinay amin'ny lovia io ary esorinay tsara amin'ny lovia mofomamy. Izahay dia mamelatra azy amin'ny habakabaka ary amin'ny alàlan'ny borosy iray no mampamamo azy. Ampiarahanay crème mofomamy manify eo amboniny.
Satria somary malalaka ny lovia dia tsy maintsy manamboatra horonana kely isika, ka nozaraiko roa ny mofomamy. Avy eo dia mihodina tsara ny faritra tsirairay. Miaraka amin'ny fanampian'ny antsy dia hokapainay ny mofomamy ho tsipika miaraka amin'ny hatevin'ny 2 ka hatramin'ny 3 cm. Mametraka ireo faribolana misaraka amin'ny lovia lehibe izahay.
Ny sisa amin'ny crème dia hapetraka ao anaty kitapo mofomamy miaraka amina noza lehibe sy olioly. Handravaka ny mofo kely rehetra manao ny endrika pompadour izahay. Farany dia manampy siramamy volontsôkôla betsaka amin'izy ireo tsirairay avy izahay ary miaraka amin'ny alàlan'ny blowtorch dia hodoranay izany. Amin'izany fomba izany dia ho maloto miaraka amin'ilay tsiro voatono izy ireo. Hataontsika ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo ary hanompo azy ireo mangatsiaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Santa Fe Pioneers
Apetaho amin'ny TUNAFISH
Ovy misy atody vaky sy chorizo